borgward myanmar, Author at Borgward Myanmar
BX7 100 Years
Jury’s Choice Award (BX5)
Author Archives: borgward myanmar
Drive Media Myanmar မှ ကြီးမှုးကျင်းပသော တတိယအကြိမ်မြောက် Myanmar Car Of The Year Award 2019 တွင် ကျွန်တော်တို့Borgwardရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး Model တစ်ခုဖြစ်သော BX5 မှ Jury’s Choice Award ကို ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၁၉ ခုနှစ် Germany နိုင်ငံတွင် စတင်ခဲ့သော BORGWARD အနေဖြင့် ယခု ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် တွင် နှစ် ၁ဝဝ ပြည့် ခဲ့ပါပြီ။ Myanmar Car Of The Year ၏ Jury’s Choice Award ကို Brand (၁၂) ခု ၊ ကားအမျိုးအစားပေါင်း (၄၃)စီး အနက်မှ ကျွန်တော်တို့ Borgward BX5 ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
Back To Overviews
CarsDB Autoshow Yangon 2019
CarsDB Autoshow Yangon 2019 ကားအရောင်းပြပွဲကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၁၅ ၊ ၁၆ ၊ ၁၇ ) ရက်နေ့ The One Entertainment Park တွင် BORGWARD ကားများကို Promotion ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဂျာမနီကားထုတ်လုပ်ရေး Borgward မှ ပြည်တွင်းသို့ SUV မော်ဒယ် ၃ မျိုး တင်သွင်းရောင်းချ
CarsDB မှ ကြီးမှုးကျင်းပသော ရန်ကုန်မြို့တွင် အကြီးကျယ်ဆုံး မော်တော်ယာဉ်ရောင်းပြပွဲ ကြီးကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာ ( ၁၇ - ၁၈ - ၁၉ ) ရက်နေ့ သုဝဏ္ဏဘူမိ Event Park တွင် မြန်မာပြည် ကားဈေးကွက်သို့ စတင်ဝင်ရောက်လာသည့် Germany Brand ဖြစ်သော BORGWARD အမှတ် တံဆိပ် BX5 , BX7 , BX7 TS တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ တရားဝင် ဖြန့်ချီခွင့်ရသူ Go Excellent Myanmar Co,Ltd မှ တရားဝင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
Established in Bremen, Germany in 1919 by automotive pioneer Carl F.W...
No. 125 & 131, (5) Ward, 8 Mile, Pyay Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.
©Copyright 2019. Borgward Myanmar. Developed by Myanmar Web Designer